Izimpawu zomtshato ngexesha lonyaka. Ziziphi iimpawu zomtshato ezizisa uvuyo, kunye nempawu zomtshato ezimbi
Ubudlelwane Umtshato Imiqondiso yomtshato
Izimpawu emtshatweni: ubulumko bendoda kunye neenkolelo zentliziyo
Uninzi lwabafazi abatshaba bakholelwa kwimimiselo yomtshato. Kwaye ukuba iindawo eziqhelekileyo zibaphatheka njengezinto ezihambelanayo kunye nokubandlulula, ngoko ke amantombazana izinto ezinjalo zibaluleke kakhulu. Ngoko ke, kuyafaneleka ukuphatha loo mbonakaliso ngobubele. Kwaye, ekugqibeleni, ubulumko bulumko buchaza imiqondiso emininzi kwindlela yokucinga, kwaye kungengenelo lobuthixo.
Ixesha lomtshato kunye nemozulu
Ngokwemvelo, isixa esinamandla siya kutshintshela umhla womtshato. Ngokomzekelo, umtshato onyakeni omtsha awuyiyo isigqibo esihle kakhulu. Iintsuku ezivunyelwe umtshato azikho ezininzi, kwaye ngokweenkolelo ezidumileyo, umtshato waseJanuwari awuqinisekisi ukuba ubomi bomtshato obude, ngakumbi kwisiqingatha esomeleleyo. Disemba phantse ngokugqibeleleyo kwixesha lokuzila ukudla. Akukho sizathu.
Kodwa inyanga ezayo iya kuba yimpumelelo kakhulu. Imitshato yaseFebruwari kwimasiko yomtshato yaseRussia yoxolo nokuvisisana kwintsapho. Ngo-Matshi akakho embi, nangona umtshato kwinyanga yokuqala yentwasahlobo ubonisa isiprofeto sobomi kwinqanaba lomhambi.
Ehlotyeni inyanga efanelekileyo kakhulu ngoJuni. Kubantu libizwa ngokuthi "i-honeymoon". Okokuthi, omiyo kwintsapho iya kuba nobuninzi.
Ekwindla, into embi yomtshato ihambelana kuphela ngo-Oktobha: kubomi obunzima nobunzima.
Ngokwahlukileyo, kukho umcimbi womtshato onyakeni. Ngakolunye uhlangothi, kukholwa ukuba eli xesha alibi nelungelelaniso lokuqala, okokuthi, ngokwemvelo, yintsapho. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, kukho i-omen kakhulu endala yomtshato ngomnyaka wokugqithisa. Kwiminyaka emininzi edlulileyo unyaka wokuqhawulwa ngawo wawubizwa ngokuba ngumnyaka wabatshatileyo. Kwaye amantombazana ngokwabo akhetha abaphathi bawo, athumela abadlali beemidlalo emakhaya abo. Umyeni wayengenalo ilungelo lokunqaba. Kubonakala ukuba, ngenxa yesi sizathu, kwaye kwakukho inkolelo malunga nama-frogs.
Imvula emtshatweni nayo ichazwa ngeendlela ezimbini. Okhokho bethu babhekisela kwixesha lesimo sezulu ukuya kwimimiselo emihle yomtshato, njengoko amanzi atshaba athembisa isivuno esihle kakhulu. Namhlanje, abanye abantu bazama ukubopha imvula kunye neenyembezi. Nangona kunjalo, ezi ziindaba ezimbi kubantu abancinci. Imvula - ngokuqinisekileyo, ukuba inhlalakahle, nangona ikwazisa ubunzima obongezelelweyo kulo mbhiyozo. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuqwalasela imimiselo yemozulu ukugqiba xa ulungiselela umtshato .
Impawu zomtshato zomtshakazi nomyeni
Iindumiso ezidumileyo kwiintlobo zabantu: uphawu malunga nombhinqo womtshato. Njengaye, umyeni akafanele abone ingubo yintanda yakhe, ngaphandle koko umnqweno kunye nokunyamekela ubuhle bakhe abuyi kuhlala ixesha elide. Kwakhona, awukwazi ukugqoka iingubo kumnye umntu. Awukwazi ukutshata okanye uqhawule umtshato ngokukhawuleza.
Ndimele nditsho ukuba imiqondiso yomtshato ingenakwenzeka. Amawaka abatshatileyo abatshatileyo ngokutshata. Kwaye abachaphazelekayo bathatha inxaxheba ekukhetheni ingubo. Yaye ngubani ozobini oza kuhlala ixesha elide engaziwayo.
Izimpawu nomfazi okhulelwe nazo ziphikisana kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, umyeni ufumana uvuyo oluphindwe kabini, ngolunye uloyiko-uloyiko lo bungqina ngokukhohlakala okunokwenzeka. Nangona kunjalo, ebantwini le miqondiso yomtshato ayifakwanga.
Kwintlanganiso yomtshato, into ebhetele kakhulu ukuwahla iindandatho. Okanye uthenge encinci. Ngokweempawu, ukuphazamiseka kunye nobunzima bokuqonda ngokufanayo ziya kuhamba nomtshato wonke.
Nangona kunjalo, nayiphina impawu emihle okanye embi emtshatweni ngumbono ophantsi. Akukho zigqibo eziqinisekiswa yiyiphi na manani. Ngaphandle komhla womtshato. Kodwa ngenxa yokukhetha kwakhe, ekhokelwa yimibono yabantu, kukho inkcazelo engqiqo.
Iimpawu kunye nezinkolelo ngaphambi komtshato
Izibonakaliso ezicacileyo ukuba uzakufumana ukuthanda uthando kungekudala
Umtshato: iimpawu, amasiko
Imiqondiso yomtshato ngomtshakazi nomyeni: into enokuyenza kwaye ayikwazi ukuyenza ukuze ubomi buvuyiswe
Ngaba ufanele ukuboleka ngoku?
Isobho se-eggplant kunye ne-eggplant kunye ne-lentils
Iyintoni ukusetyenziswa kwe-aqua aerobics kubantwana?
Indlela yokukhetha i-blank blanket
I-cream yomsizi we-mushroom
Ukutya kweentsuku ezihlanu